तिथि मेरो पत्रु » किन लामो Girls छोटे मान्छे तिथि
किन लामो Girls छोटे मान्छे तिथि
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Dec. 04 2020 |2मिनेट पढ्न
बाहिर कहिल्यै तिनीहरूलाई वा तिनीहरूलाई भन्दा छोटो एक मान्छे भन्दा एक केटी अग्लो त्यहाँ दिनांक छ कसले? कसरी यो जानु भयो? यो अप्ठ्यारो वा बस आरामदायी थियो? यो मुद्दा अहिले एक जबकि लागि डेटिङ दृश्य boggling गरिएको छ, केही विश्वास रूपमा मान्छे डेटिङ तिनीहरूलाई अग्लो बालिका वा तिनीहरूलाई भन्दा छोटो मान्छे. यो सिद्धान्त तथ्य संग demystified थियो उच्च समय छ!
ठीक, शायद यो मान्छे लामो हुनुपर्छ भन्ने यो विश्वास गर्नुपर्छ पछि छोटो छ जो एक मान्छे चुम्बन गर्न तल झुकन अप्ठ्यारो एक बिट महसुस सक्छ? तर जहाँ कि नियम आउनुभयो? यो कि कम मान्छे मतलब र अग्लो बालिका बस किनभने डेटिङ दृश्य मा नियम मिति कहिल्यै गर्नुपर्छ?
के अग्लो केटी छोटो मान्छे र विपरीत रुचि भने? वास्तवमा लामो बालिका र छोटो मान्छे रुचि गर्नेहरूलाई छन् रूपमा यो सबै व्यक्तिगत प्राथमिकतामा तल फोडा गर्नुपर्छ, यो विश्वास वा छैन! अनि त्यस्ता मानिसहरूलाई आफ्नो डेटिङ जान हुनेछ, अरूलाई भन्न के को बावजूद.
एक मान्छे र एक केटी एकअर्काको उचाइ संग आराम गर्दै छन् गरुञ्जेल, त्यसपछि अरू कसैले तिनीहरूलाई आफ्नो राय लागू गर्न प्रयास गर्ने अधिकार छ. यो अझै पनि सजिलो भनेजति तर्क थियो केही रूपमा demystified यस सिद्धान्त आवश्यक छ, मान्छे तार छन् जोडेर सधैं छोरीहरूको अग्लो हुन, तिनीहरूले छोटो हो भने र सधैं अप्ठ्यारो महसुस हुनेछ.
यो मान्छे जरूरी यो टिप्पणी छैन भनेर भन्नुभयो छ, तर तिनीहरूले बनाउन केही टिप्पणी तिनीहरूले अग्लो केटी संग कति असहज पर्दाफास हुनेछ. आफूलाई बारेमा असुरक्षित छ जो एक मान्छे बारेमा आकर्षक केहि कहिल्यै छ.
आत्म-विश्वास सधैं यस्तो अवस्थामा एक ठूलो भूमिका खेल्छ. तिनीहरूले पनि मिति छ भएकोले, त्यसपछि छोटो मान्छे आफ्नै छाला मा विश्वस्त हुनुपर्छ र आफ्नो उचाइ बारेमा चिन्ता छाडें. यो पनि तिनीहरूले fancied जसलाई कि अग्लो केटी संग तिनीहरूलाई मिति स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ, तर सोचे कहिल्यै उनीहरूको उचाइ तिनीहरूलाई बाहिर जाने.
अरे हाँ, अग्लो बालिका पनि आफूलाई सिक्न केही कुराहरू छन् रूपमा अझैसम्म मुस्कान हुँदैन. छोटो मान्छे डेटिङ तपाईं आफ्नो घाँटी आफ्नो उचाइ कमी तल धकेल्नु सही दिंदैन. मान्छे एक तोड, यसको पर्याप्त तपाईं एक चुम्बनले दिन रूपमा यति छिपकर जाना राख्दा कठिन!
अग्लो, अँध्यारो, र सुन्दर आदर्श हुन छैन. बहुत उचाइ आकर्षक देखिन्छ रूपमा, अधिक आकर्षक छन् कि विशेषताहरु छन् भने यो निर्णायक कारक हुन हुँदैन.
उचाइ केटासित नगर्नुहोस्, व्यक्ति मिति! यो अग्लो छ जो एक मान्छे पाउन एकदम सम्भव छ, तर एक व्यक्तित्व वा मनोवृत्ति एक मटर को आकार संग. समान छोरीहरूको लागि जान्छ. उचाइ केवल एक सानो कारक हुनुपर्छ, एक निर्णायक कारक. एक उनि इच्छा उचाइ संग एक व्यक्ति केटासित हुन्छ भने, राम्रो र असल. भने छैन, यो अझै पनि राम्रो र असल छ.
मिति खोज्दा पहिलो प्राथमिकता रूपमा उचाइ गर्नेहरूसित लागि, त्यसपछि तिनीहरूले शायद समस्या यिनै हुन सक्ने पहिलो आफूलाई विचार गर्नुपर्छ. लम्बाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, तर मनोवृत्ति गर्न सक्छन्. छोटो मान्छे demystified संग शायद यो लामो केटीहरू यो सिद्धान्त गर्ने एक मात्र बाटो छ.
7 एक रोमान्टिक सम्बन्ध लागि सुझाव
तपाईंको जनावर तपाईं के भन्नुहुन्छ